कास्कीको पार्चेमा हिमताल जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
मङ्गलबार ६ असोज, २०७७ | Tuesday, September 22nd, 2020
कास्कीको पार्चेमा हिमताल
पोखरा । अन्नपूर्ण हिमालबाट खसेको हिउँको थुप्रो पग्लिएर कास्कीको पार्चेमा हिमताल बनेको छ। स्थानीय बासिन्दाले यो तालको नाम कफुचे राखेका छन्।
नेपालमा चार हजार पाँच सय मिटरमाथि मात्रै हिमताल भेटिएका भए पनि यो ताल भने दुई हजार चार सय ३७ मिटरको उचाइमा रहेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
कुफुचे हिमताल पर्यटकीय नगरी पोखराबाट करिब ५१ किलोमिटर उत्तरपूर्वमा पर्छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप)मा पर्ने यो तालसम्म पुग्न सिक्लेसबाट दुई दिनको पैदलयात्रा गर्नुपर्छ। सिक्लेस पोखरादेखि ३९ किलोमिटरको दूरीमा पर्छ।स्थानीय गुरुङ भाषामा ‘क’ भनेको हिउँको थुप्रो, ‘फु’ भनेको खस्नु र ‘चे’ भनेको समथर भाग भन्ने हुन्छ।
यिनै तीन अक्षरको अर्थबाट स्थानीयवासीले यसको नाम कफुचे ताल राखेका हुन्। संरक्षणकर्मी डा. हुम गुरुङले हाल ताल बनेको क्षेत्र दुई दशकअघिसम्म समथर मैदान भएको बताए। ‘पहिला यो ठाउँ समथर जमिन थियो।
त्यही मैदानमा हिमालबाट हिउँको थुप्रो आएर जम्मा भयो’, उनले भने, ‘पहिला भेडीगोठका गोठाला हिउँको थुप्रोमा टेकेर हिँडडुल गर्थे। विस्तारै गर्मी बढेकाले त्यही थुप्रो पग्लिएर तालमा परिणत भएको हो।’
ताल बन्न झन्डै १० वर्ष लागेको उनले बताए। तालको लम्बाइ चार सय मिटर, चौडाइ तीन सय मिटर र गहिराइ ४० मिटर रहेको जापानी अनुसन्धानकर्ता डा. जिरो कोमोरिलको अनुसन्धानले देखाएको छ।
पार्चे गाविसका पूर्वअध्यक्ष मनप्रसाद गुरुङले सरकारले चासो नदिँदा यो हिमतालको संरक्षण र पर्यटन प्रवद्र्धनको काम हुन नसकेको बताए। ‘तालसम्म जान बाटो छैन’, उनले भने, ‘मुढा तेर्‍र्याएर बनाएको पुलबाट जानुपर्छ।
वर्षामा त्यो पनि बाढीले बगाउँछ। तालसम्म पुग्ने बाटो नै बन्द हुन्छ।’ उनले तालसम्म पुग्न बाटो र तीन स्थानमा तत्काल झोलुंगे पुल बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
संरक्षण व्यवस्थापन समिति सिक्लेसका अध्यक्षसमेत रहेका मनप्रसादले कफुचेबाट हिउँचितुवा, झारल, कस्तुरी, डाँफे, मुनाल पनि हेर्न सकिने बताए। विविध आकर्षणले यो पर्यटकीय गन्तव्यका लागि निकै उपयुक्त भएको उनले बताए।
विश्वमै कम उचाइमा रहेको कफुचे तालका बारेमा स्थानीय प्रशासन र पोखरेलीलाई पनि थाहा नहुनु दिक्कलाग्दो विषय भएको उनले बताए।
कफुचे हिमतालबारे हालै जानकारीमा आएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक ऋषिराम शर्माले बताए। ‘नेपालमा तीन हजारभन्दा बढी हिमताल छन्’, उनले भने, ‘२१ वटा हिमताल जोखिममा छन्।
कफुचे तालको अध्ययन गरी तत्काल संरक्षणको काम गरिनेछ।’ पृथ्वीको तापक्रम बर्सेनि बढ्दै गएकाले हिमताल बन्ने क्रम पनि बढेको उनले बताए।
सिक्लेस पार्चे होटल व्यवस्थापन समितिका सचिव धनप्रसाद गुरुङले कफुचे हिमताल हेर्न फाट्टफुट्ट पर्यटक आउने गरेका बताए। ‘बाटो नभएकाले भीरपाखामा लड्दै जानुपर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘हिँड्दा जतिसुकै दु:ख पाए पनि तालमा पुगेपछि यात्रुखुसीले फुरुंग हुन्छन्।’
एक्यापका पर्यटन अधिकृत नरेन्द्र लामाले यो नयाँ हिमतालबारे विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी रहेको बताए।
कास्कीका स्थानीय विकास अधिकृत तारानाथ अधिकारीका अनुसार कास्कीमा अहिलेसम्म नौवटा तालमात्र रहेको अभिलेख छ। उनले पार्चेमा नयाँ हिमताल बनेको जानकारीमा आएको बताए।
यस्तो गम्भीर अभियोगमाथी दीपिकालाई कंगनाले दिइन् झड्का !
मङ्गलबार ६ असोज, २०७७
उनी हुन् दुनियाँकै ‘सुपर मम’ यति जवान की छोरा साथमा हुँदा उमेर कसैले अनुमान गर्न सक्दैन !
तपाई हामी जो कोहीले नजान्दै गर्ने यी ५ गलत जीवनशैलीका कारण निम्त्याउँछ उमेरमै बुढ्यौली
नेकपा नेतालाई तलब, कार्यकर्तालाई जीवन निर्वाह भत्ता
महिला पुरुष मा नै स्त’न क्यान्सर, अहिले नै कारण थाहा पाए बच्न सकिनेछ
बलिउडमा अर्को तरंग, अभिनेत्री पायल मुद्धा दर्ता गर्न प्रहरी कार्यालय पुगिन् !
अभिनेत्री दीपिका पादुकोणको गोप्य च्याट लिक भएपछि बबाल
राष्ट्रसङ्घ सुदृढ र सशक्त बहुपक्षीयताको केन्द्र बन्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
आइपीएलमा बैंगलोरको शानदार विजयी सुरूवात, आज राजस्थान र चेन्नेई भिड्ने
म्यान्चेष्टर सिटीको दवदवा सुरु, उल्भ्सलाई ३–१ ले हरायो
इब्राहिमोभिच चम्किदा मिलानको शानदार जित
जे माग्यो त्यही दिने नि:सन्तानलाई सन्तान दिने अति विश्वासका धरोहर दुप्चेश्वर महादेव दर्शन गर्नुहोस्
सावधान ! एक्कासी बिग्रियो मौसम, विभागले आकस्मिक सूचना निकाल्दै पाँच दिनको अपडेट दियो
मुख्य सचिव बन्ने पक्का भएका भाग्यमानी को हुन् ?
तयार रहनुहोस् : हुने भयो परीक्षा
यसरी हुनेभयो मन्‍त्रिमण्डल फेरबदल
स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको परिवारमा फेरी कोरोना संक्रमण, पुनः होम क्वारेन्टाइनमा बसे
सूर्य दक्षिणायन हुँदा यी राशिमा देखियो यस्तो प्रभाव : राशिफल/२०७७ असोज ६ गते मंगलबार
जब बालिका चंगाको धागोसँगै माथी आकाशमा हावामा उडिन् [ भिडियोसहित ]